Zava-dehibe ny fahafantarana momba ny Different Bitcoin Cards
Inona no bitcoin debit karatra?
Bitcoin karatra ireo karatra izay mitovy amin'ny karatra banky tapaka. Antsoina koa hoe Bitcoin Debit Card, ireo karatra mahatonga ny mpampiasa hanao varotra izay niova fo Fiat vola ho Euros, Dolara sy ny kilao. Ireo karatra mamela anao recharge amin'ny Bitcoin famantarana Coin. Ny BTC dia avy eo niova fo ho vola tsy tapaka, rehefa manao raharaham-barotra. Ny voninahitra ao amin'ny coinsare na in BTC na ny Fiat mitovy. Ohatra ny orinasa ireo dia ahitana CoinsBank, Cryptopay.me, Spectrocoin na Xapo.
Manadihady ny hafa karatra bitcoin fampitahana.
Araka ny noresahina teo aloha, dia afaka mahazo karatra avy bitcoin debit bitcoin mpivarotra. Xapo Wirex sy hanome anao ny fahafahana hividy bitcoin mivantana avy amin'ny tranonkala. Raha ho an'ny orinasa hafa tsy voalaza eto, dia mila mividy azy io avy amin'ny antoko fahatelo.
Ny telo be mpampiasa indrindra Fiat vola ampiasaina manerana birao no Dollars Amerikana, Lehibe kilao Britanika sy Eoropeana Euro. Raha mpivarotra hafa mampiasa ny bitcoin na Rosiana Fiat vola ho toy ny endriky ny barotra. Ny safidy ny Fiat vola miankina amin'ny toerana.
Ny debit karatra avy amin'ny teny mivaingana toy ny karatra plastika etsy andaniny, ary ny amin'ny ohatra iray hafa, izy ireo ny zava-misy miseho tahaka ny virtoaly, amin'ny endrika ity, tsy afaka mihazona ny karatra, nefa azo antoka fa misy. Ary izy ireo manokana amin'ny maha mba hahazoana antoka fa afaka ihany no mahazo, ary mandany izany amin'ny fomba handefasana tiany anao. Ireo karatra ireo virtoaly hita amin'ny aterineto ihany no.
Ny maha zava-dehibe ny fahafantarana ny hafa bitcoin karatra
Zava-dehibe ho an'ny mpanjifa ny mahafantatra ny hafa bitcoin karatra ho an'ny maro antony. Anisan'izany ireto manaraka ireto:
Virtual sy Real: Bitcoin sasany famantarana ny zava-misy virtoaly. izany, dia midika izany fa misy ihany ny karatra amin'ny aterineto. Ary ny olona hampiasa azy io, toy izany ny ankamaroan'ny olona iray miditra aterineto ho amin'izany tanjona. Isan-karazany ny fahafantarana ny karatra bitcoin manampy kasainao ary ho tsara kokoa fanapahan-kevitra sy drafitra mialoha. Misy toerana iray izay mahasoa ny loharanom-baovao amin'io lafiny io:http://bitcoincardcomparison.com/. Anisan'izany ny safidin-tsakafo no mampianatra anareo ny virtoaly, na plastika misy safidy.
Izany koa dia mampiseho anao ny Fiat vola misy safidy miankina amin'ny toerana sy ny famantarana.
Pricing: Ny fahafantarana ny hafa bitcoin karatra dia zava-dehibe ho an'ny Pricing. BTC tsirairay avy sy ny vidiny hataonao tombany. Izany dia ahitana fiampangana nanameloka ny teny rehetra raharaham-barotra, ny lanjan 'ny bitcoin amin'ny Fiat vola, ary koa ny vola lany amin'ny fikarakarana. Ny fananana ny fototra maso dia manampy anao hanao fanapahan-kevitra baovao bebe kokoa momba izay tianao.
Danja manerana birao vaovao: bitcoincardcomparison.com no hany sehatra izay manome anao fanazavana tena ilaina fa mila karazana rehetra manerana bitcoin karatra mpanome tolotra. Ary tsy izany ihany no mahalala manampy fanapahan-kevitra, izany ihany koa ny mamonjy ny fotoana sy ny manala ampoizina mety hitranga.
Bitcoin Cards dia mahasoa fomba fanaovana varotra amin'ny bitcoin cryptocurrency sy bitcoincardcomparison.com, no iray-mijanona ho ilaina foibe momba bitcoin debit karatra.